Hiran State - News: Hasan Daahir Aweys oo maalmahani ku sugnaa qeybo ka tirsan Hiiraan iyo qorshahiisa cusub.
Hasan Daahir Aweys oo maalmahani ku sugnaa qeybo ka tirsan Hiiraan iyo qorshahiisa cusub.
Hiiraan:- Kedib markii ay si weyn u wiiqantay awoodii guud ee ururka Shabaab ayaa shirar maalmahani u socday hogaamiyaal ay ka mid yahii Abuu Mansuur Roobow, Hasan Daahir Aweys iyo Ali Dheere ayaa talooyin badan oo leysku dhaafsaday halkaasi ayaa waxaa leysla meel dhigay dhaw qodob aanu ka xusi karno.
1- Maadaama ay wiiqantay awoodii guud ee Shabaab in Abuu Mansuur lagula taliyey in loo doorto Amiirka cusub ee Shabaab ka koofurta Somaliya iyadoo si buuxda loola wareegayo gobolo ay ka mid yahiin Hiiraan, Bay iyo Bakool.
2- In taliyaha ciidanka amaba Hiiraan loo gacan galiyo Hasan Daahir Aweys iyadoo meesha laga saarayo wiilka yar ee dhalinyarada ah ee la yiraahdo Yusuf Ali Ugaas iyo inta badan saraakiisha kale ee degaan ahaan ka soo jeeda Hiiraan.
Intaasi kedib waxaa safar sahan ah ku kala bixiyey degmada jalalaqsi wafti uu hogaaminayo Hasan Daahir Aweys halka Abuu Mansuur Roobow Ali uu isaguna tagay meelo cayim oo ka tirsan Hiiraan si uu u hubiyo inuu isku haleyn karo shacabka Hiiraan hadii ciidamada uu hogaaminayo Hasan Daahir ay la wareegaan amaanka gobolkaasi iyo dhibta lagala kulmi karo shacabka reer Hiiraan.
Safaradii Hasan Daahir iyo Abuu Mansuur ayaa la soo gabogabeeyey iyadoo dhawaantan la qorsheynayo in Abuu Mansuur loo caleema saaro inuu Amiir u noqdo Hiiraan, Bay iyo Bakool maadaama ururkii guud ee Shabaab ay u muuqato in lagu kala tagi doono dhawaantan kedib markii ay awooda ururka siweyn u wiiqantay.
Hasan Daahir Aweys ayaa isagu sahmiyey goobo ku yaala degmada Jalalaqsi sida xeradii Qaxootiga ee Dirgooys iyo bar ku wanaagsan koontalka ee loo yaqaano Jimbiley.qorshahan Amiirka loogu magacaabayo Abuu Mansuur ayaa lagu sheegay inuu soo jeediyey Hasan Daahir Aweys oo doonayo inuu magaca Shabaab isagoo isticmaalayo uu Hiiraan ku qabsado isagoo wato ciidamo beeleed reerkiisa u badan. laakinse markaad dhinaca kale ka eegto dhalinyarada ka tirsan Shabaabka Hiiraan ee degaankaasi u dhashay iyaguna ma shar yara qorshe kaasi ka duwan ayey diyaarsadeen oo waliba shacabka Somaliyeed ka yaabin doona marka ay ku dhawaaqaan Hasan Daahir iyo Abuu Mansuur hogaankan cusub ee Amiirka looga dhigayo 3daasi gobol Abuu Mansuur Roobow. sida ay Hasan Dahir iyo kooxdiisa qorshahan u wataan ayey kuwa reer Hiiraanka ah ee Shabaab ka tirsana qorshe kan ka duwan u wataan inkasta oo aanu dooneyn in aanu ka hor dhacno hada.
Guud ahaan ururka Shabaab ciidankooda waxey hada kuwooda ugu aqliga badnaa heshiis hoose la galayaan shacabka degaanada ay ka soo jeedaan waxaana hada bilaaw maraya heshiis la filayo inuu dhax maro dowlad goboleedka Puntland iyo kooxdii Atem hogaaminayey ee ku jiray buurta Galgala. halka Shabaabka degaan ahaan ka soo jeeda Hiiraana ay sugayaan oo kaliya inta ay Hasan Daahir iyo Abuu Mansuur kaka dhawaaqayaan ururkaan cusub, kedibna waxaa si lama filaan ah loo arki doonaa iyadoo ay hal geed wada fadhiyaan Shabaabkii Hiiraan u dhashay iyo ciidanka xoogaga reer Hiiraan oo halmeel Shaah ku wada cabaya dhawaantan.
Walow ay fiicnaan laheyd iney soo deg degto qorshaha oday Aweys iyo Abuu Mansuur ay wataan oo ficil ahaan loo arko sida laga soo xigtay mid ka mid ah Shabaabka Hiiraan ee u dhashay degaankaasi.
Isku soo duuboo Shabaab hada waxey isku bedeleen qabiil qabiil oo kooxkasta waxey dooneysaa iney magac diin ku qabsato degaano ay ka mid yahiin Hiiraan.Hadaba la soco warbixino dheeri ah qaabkii uu ku tagay Hasan Daahir Jalalaqsi, mudadii uu ku sugnaa iyo meesha uu hada ku sugan yahay Abuu MAnsuur Roobow.
· admin on July 23 2011 20:10:40 · 0 Comments · 2323 Reads ·
14,581,064 unique visits